Ivan Rakitić oo iska diiday dalabyada Manchester United iyo Inter Milan, si uu ugu biiro kooxdan – Gool FM
(Barcelona) 22 Okt 2019. Xiddiga kooxda Barcelona ee Ivan Rakitić ayaa diiday dalabyo kaga yimid Manchester United iyo Inter Milan, isagoo rajeynaya inuu u dhaqaaqo naadiga AC Milan bisha Janaayo, sida uu qoray wargeyska “Sport” ee dalka Spain.
31 jirkan reer Croatia ayaa lumiyay booskiisii ​​muhiimka ahaa ee kooxda Barcelona uu hogaaminayo macalinka reer Spain Ernesto Valverde xilli ciyaareedkan, wuxuuna inta ugu badan kulamada uu daris la noqday kursiga keydka.
Ernesto Valverde ayaa wuxuu hadda doorbidayaa inuu ku tiirsanaado khadkiisa dhexe qaab ciyaareedka xiddiga reer Holland ee Frenkie de Jong iyo kan reer Brazil ee Arthur Melo, sidoo kale midkood xiddigaha Sergio Busquets iyo Arturo Vidal.
Haddaba wargeyska “Sport” ee dalka Spain oo si aad ah ugu dhow kooxda Barcelona ayaa wuxuu sheegay ​​in Ivan Rakitić uu doonayo inuu u dhaqaaqo AC Milan, sidaas darteedna uu iska diiday dalabyada uga yimid kooxaha Manchester United iyo Inter Milan, Rossoneri ayaa ah dooqiisa koowaad suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in haddii uu Ivan Rakitić ku guuldareysto u dhaqaaqista kooxda weyn reer Talyaani ee AC Milan, inuu u jeedsan doono caasimada Faransiiska ee Paris, si uu ugu biiro kooxda Paris Saint-Germain, taasoo xiiso weyn ka muujisay inay la saxiixato tan iyo suuqii xagaaga ee la soo dhaafay.
Isbar-bardhig lagu sameeyay kulamadii ugu dambeeyay Premier League ee Arsène Wenger iyo kuwa ugu horreeyay Unai Emery ee Arsenal